Continued Massacre in State of Oromia by the Tyrannical TPLF Government in Ethiopia: Appeal Letter Submitted to UN | OromianEconomist
Oromia: Humnaa fi Kijibni Furmaata Rakkoo Siyaasaa hin Tahu February 27, 2016
Posted by OromianEconomist in #OromoProtests, Colonizing Structure, Ethiopia's Colonizing Structure and the Development Problems of People of Oromia, Afar, Ogaden, Sidama, Southern Ethiopia and the Omo Valley.
Tags: "Pathology of Colonialism" Tearing Apart Nation, #OromoProtetst2016, Africa, Continued Massacre in State of Oromia by the Tyrannical TPLF Government in Ethiopia: Appeal Letter Submitted to UN, Ethiopia's Colonizing Structure and the Development Problems of People of Oromia, Ethnic cleansing Against Oromo People, Genocide, Humnaa fi Kijibni Furmaata Rakkoo Siyaasaa hin Tahu, Invention of Ethiopia: The Making of Dependent Colonial State in Northeast Africa by Bonnie K. Holcomb (Author), Ogaden, Oromia, Oromo
SBO (Guraandhala 27 bara 2016):Haalli Oromiyaa yeroo ammaa, duula jaarraa 19ffaa ummata Oromoo fi Oromiyaa irratti gaggeessameen wal fakkaata. Duulli jaarraa 19ffaa, ummata Oromoo waan hunda dhabsiise. Akeekaa fi kaayyoon humnaan jaarraa 19ffaa keessa raggaafame ummata Oromoo biyyaa fi qabeenya dhabsiise. Of lagatuun eenyummaa alagaa akka maxxanfatuuf dirqee, Oromummaa daandii dhabamaa qabsiise. Aadaa isaa boonsaa fi sirna bulchiinsaa dimokraatawaa dhabamsiisee sirna cunqursaa fi saaminsaa bakka buuse. Duulli jaarraa 21ffaa kana keessatti ummata Oromoo irratti Wayyaaneen gaggeeffamaa jirus kana irraa addummaa hin qabu. Mootummaan Wayyaanees ummata Oromoo jilbeenfachiisuun ol aantummaa ofii irratti dagaagsuun, qabeenya isaa saamuu fi booji’uun abbummaa irratti qabaatee saamaa jiraatuun akeeka isaa ti.
Sirni gabrummaa ummatni Oromoo Jaarraa 19ffaa irraa eegalee keessa jiraatuuf dirqame bifa isaa jijjiirrataa hanga ammaatti itti fufus, Ummatni Oromoo gabrummaa jalaa of baasuuf qabsoo adeemsiisaa tureen dhabama irraa kan of baraare tahullee, alagaa of irraa qaarsisuun mirga isaa hin gonfatne. Hanga ammaatti alagaatu ummata Oromoo fi Oromiyaa irratti ajaja. Qabeenya ummata Oromoo irratti alagaatu abbaadha. Kanneen isa bulchan ofiif filatuuf mirga hin arganne. Kan bittootni muudaniif jalatti bula.
Kana kan ummata Oromoo baadiyyaa maayyii irraa hanga magaalota gurguddootti gaaffii tokkicha qabatuun akka fincilu taasise. Gaaffiin qabatee ka’ees, gaaffii mirgaa, gaaffii dimokraasii, gaaffii ofiin of bulchuu ti. Gaaffilee ummatni Oromoo yeroo ammaa kaasaa jiru irraa, haalli Oromiyaa keessatti mul’ataa jiru hundeen sirna gabrummaa raasamuu fi kan itti fufuu hin dandeenye tahuu hubachiisa. Bittootnis qabrii irraa of hambsiuuf diddaa ummataa kana ukkaamsuuf tarkaanfii faashistummaa fudhataa jiran. Tarkaanfii bittootaa kanaanis Oromiyaa fi ummatni Oromoo jeeqamaa jiran. Ji’oottan sadan dabraniif humni addaa fi amanamaa sirnichaa, Agaazii, gandeen Oromiyaa hunda keessatti bobbaafamee lammiilee Oromoo ajjeesuu, hidhuu fi ummata hiraarsuu irratti argama. Tarkaanfii gara jabinaa humna Wayyaaneen fudhatamaa jiru kanaanis, lammiileen Oromoo xiqqaa hanga guddaatti, dhalattootni Oromoo hawaasa keessatti mul’atoo fi beekamoo ganda mara keessatti ajjeefamaa jiran.
Bittootni tarkaanfii suukanneessaa kanaan ummata Oromoo jiilchuun qabsoo bilisummaa irraa fageessuu, akkasumas Ummata Oromoo Bahaa fi Dhihatti qooduun garaagarummaa uumuudhaan qabsoo itti jiru akka dhaabu gochuuf guddoo hojjatan. Kana malees tarkaanfii suukanneessaa ummata Oromoo irratti fudhataniin ummatootni cunqorfamoo biroo gaaffii fakkaataa qabanii fi sirna mootummaa Wayyaanee bututee jiru morman, “Nutis gaaffii mirgaa yoo gaafanne hiree fakkaataatu nu mudata” jedhanii sodaatuun adabatanii akka taa’aniif tarkaanfii bineensummaa fudhatan. Kun garuu yaada hokkolaa fi fudhatama hin qabne tahuu irraa lagatamee Fincilli Xumura Gabrummaa (FXG) itti fufe. Ummatoota kan fincilsiisu roorroo dha. Jiraatuu fi duuti garaa garummaa dhabuu irraa mirgaa fi kabajaa ofiif qabsaawaa dabruu akka filatan taasisa. Murtiin ummata Oromoos kanuma.
Ummatni Oromoo qabsoo bilisummaa wayta eegale qabsoo isaatiin mirga isaa dhuunfatuuf malee bittoota cunqursaa fi saaminsa galii godhatan gaaffii isaaf deebii ni kennu jedhuun, akkasumas ofiin alatti humna biraa abdatuu irraa miti. Kana irraa ti, har’a qe’ee Oromoo keessatti kan ajjechaan babal’ate. Hidhaa fi roorroon kan hammaateef.
Mootummaan Wayyaanee har’as furmaatni rakkoo afaan qawwee keessaa argama jechuun tarkaanfiin fudhataa jiru kanneen isa waliin hiriiran illee isa dhabsiisaa akka jiru tarkaanfii lammiileen Oromoo fudhataa jiran ragaa taha. Hidhattootni gandaa, poolisootnii fi bulchitootni sadarkaa adda addaa tarkaanfii Wayyaaneen ummata keenya irratti fudhataa jiru sirrii miti jechuun sirna saaminsaa fi cunqursaa Wayyaaneetti gara galaa jiran. Kana irraa kan rifate mootummaan Wayyaanee karaa ministera beeksisaa ibsa Guraandhala 26, 2016 gazexeessotaaf kenneen Fincila Xumura Gabrummaa ummatni Oromoo itti jiruuf yakka hin jirree fi hin fakkaatneen isaa yakkuuf osoo yaaluu dhagahamee jira.
Sadarkaa duraatti, hogganootni sirnichaa, “ Jaallattanis jibbitanis” jechuun doorsisanii gaaffii ummata Oromoo dhaamsuuf abbalan. Wayta kun fashaletti “gaaffiin ummata Oromoo gaaffii haqaa ti! Bulchiinsi
Gaarii dhabamuu irraa madde” kan jeddhuun, gaaffii isaa kan deebisan fakkaatanii dhihaatan. Ummatni Oromoo waadaa kijibaa tahuu hubatuun mormii eegale itti fufuu irraa ,” kanneen fincilan farra misoomaa ti, sheexanootaa fi kashlabbootaa ” jechuun ummata doorsisuu fi arrabsuutti tarkaanfatan. Kanaanis ummatni Oromoo kan hin dhaabbanne tahuu wayta hubatanitti ammoo yakka kijibaa “Ergamtoota Shaabiyaa ti” jedhu qabatanii gadi bahan.
Adda Bilisummaa Oromoo yakkuu fi qabsoo ummatootaa Shaabiyaan wal qabsiisuun haaraa miti. “Kan bishaan nyaate, hoomacha qaqqabata” akkuma jedhamu tahee sababa itti barbaadan malee gaaffiin ummatni Oromoo kaasee gaaffii haqaa, gaaffii dimokraasii fi kan mirgaa ti. Kaleessas ni ture. Hanga deebii quubsaa argatuttis itti fufa. Ummatni Oromoo mirga isaaf kan falmatu ajaja ykn qajeelfama alagaa irraa argatuun akka hin taane ammoo Wayyaaneen olitti kan beeku hin jiru.
Mootummaan Wayyaanee, mormii ummatni Oromoo karaa nagaa itti jiru dhaamsuuf humnatti gargaaramuu ykn sababa biraa itti barbaaduun, rakkoo siyaasaa biyyattii hin furu. Hadhaa’u illee haqa jiru beekanii fudhatuudhaan furmaata waaraaf sosso’uutu irra qajeelaa tahuu ABOn har’as irra deebi’ee hubachiisa. Ummata gabrummaan haa gahu! jedhee murannoon ka’e qawween boodatti hin deebisu. Ummata bilisummaan wareegama malee akka hin argamne hubatee bilisummaa isaaf wareega fedhe baasuuf murteeffate heddumminni ajjeechaa manatti isa hin dachaasu.
Kanaaf karaan tokkichi jiru gaaffii ummataa dhaggeeffatuu danda’uu dha. Gaaffii ummatni karaa nagaa dhiheesseef karaa nagaa deebii itti kennuun tarkaanfii baranee fi qaroomaa ti. Kanaan alatti “Humnaan waanan dhufeef humnaanan bitaa jiraa dha!” jedhanii tarkaanfii humnaa fudhatuu itti fufuun, karaa badii qabriitti geessu tahuu hubatuun gamnummaa dha.